V ho an'ny famerenana sy fanamarihana tantara an-tsary Vendetta
firosoana >> boky >> V ho an'i Vendetta avy amin'i Alan Moore sy David Lloyd
1998. London, fanjakana tsy refesi-mandidy sy mahery setra izay niforona taorian'ny ady. Tovolahy misaron-tava miaraka amin'ny kapa sy satroka no miseho ary manomboka mamono ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny governemanta.
Tsy manisa intsony aho satria tsy te handratra. Fa mandritra ny famakiana dia ho hitantsika hoe iza izy ary nahoana no manao valifaty io. Fa maninona izy no mandroso hatrany ary nahoana izy no toa manana toetra mihoatra ny olombelona.
Ny zava-drehetra dia mifamatotra amin'ny drafitra lehibe roa hafa. Ny an'ny mpiara-miasa iray ary ny an'ny mpanadihady manenjika azy ireo. Ho fanampin'izay, manana ny subplots ny tsirairay amin'ireo toerana ambony alehany isika.
Tsy maintsy tsiahivina fa ity volavolan-tsokajy ity dia fanangonana nataon'ireo mpanoratra, isa maro ireo voalohany
Ny iray amin'ireo zavatra tena tiako dia ny lahatsoratr'ireo mpanoratra manazava ny fomba nipoiran'ilay hevitra sy ireo fomba hafa noeritreretin'izy ireo, ny sarisarin-tsoratra, ny tontolo mety hitranga ary maro hafa.
Tsy misy isalasalana fa ny fotoana nahavariana ahy indrindra dia ny famitana ny boky faha-2 an'ny The Cabaret of Vice, rehefa taorian'ny toko henjana sy mahery vaika, izay toa tsy nisy nanamarina ny fihetsiny, hoy i V:
Sarobidy kokoa noho ny fahalalahana ve ny fahasambarana?
Ary io andianteny izay mbola mampieritreritra ahy io dia manome dikany ny zava-mitranga rehetra. Marina, izay fehezanteny mety amin'ny fotoana mety. Tsy manolotra soso-kevitra aho fa ny farany dia manamarina ny fomba, fa mba ho hitanao ny tanjon'ny tarehin-tsoratra, fa aza miady hevitra na marina na tsia.
Fa raha mandroso lavitra kokoa isika dia angamba tokony hanontany tena raha misy fahasambarana tsy misy fahalalahana. Satria io fanontaniana io dia midika ho valiny hoe tsia, tsy zava-dehibe ny fahasambarana raha tsy manana fahalalahana isika.
Ary raha miditra lalindalina kokoa aza isika dia tsy maintsy manontany tena hoe inona ny fahasambarana ary inona ny fahalalahana.
V ho an'i Vendetta dia zavatra mitovy amin'ny referent an'ny Anarchy, iray amin'ireo lohahevitra voarakitra ao amin'ny tantara an-tsary.
Namaky "betsaka" momba izany aho demokrasia ary ny mitovy amin'ny fahalalahana, fa tsy misy na inona na inona momba ny tsy refesi-mandidy, ary ny foto-kevitra hananako izay tsy nanadihady dia ny korontana. Avelao ny olona rehetra hanao izay tiany. Noho izany dia manohy mamaky sy mikaroka bebe kokoa momba ny anarka miandry aho.
Ity dia lohahevitra iray manan-danja amin'ny lalao, angamba mihoatra ny eritreretintsika, satria nahatonga an'i Alan Moore hiala tamin'ny sarimihetsika tamin'ny tsy firesahany ny momba ny fizarana anarchie.
- Fikomiana sy korontana be loatra, V ... anarka ve ity? Ity ve no tanin'ny fanaovana izay tianao?
-Tsy. Ity no tany fakana izay tadiavinao. Ny Anarchy dia midika hoe "tsy misy mpitondra", fa tsy "tsy misy filaminana." Miaraka amin'ny tsy refesi-mandidy dia tonga ny taonan'ny Ordunng, ny tena filaharana: izany hoe ny filaharana an-tsitrapo.
Hanomboka ny taonan'ny ordhng rehefa tapitra ny tsingerin'ny verwirrung izay henonao.
Ny fitoviana sy ny fahalalahana dia tsy rendrarendra azo esorina toy ny mahazatra. Raha tsy misy azy ireo, ny filaminana dia voatery hahatratra ny lalina tsy takatry ny saina.
Ny sarimihetsika sy ny tantara an-tsehatra
Araka ny efa nomarihinay, misy ny tantara an-tsary voalohany izay misy boky 10, ny fanangonana boky iray toa ilay novakiako, nataon'ireo mpanoratra ihany koa avy eo ny sarimihetsika 2005 izay manodidina ny tsikombakomba ny vovo-bolo tamin'ny 1605.
Elaela aho vao nahita an'ity tamin'ny fotoana farany ary avy amin'ny zavatra tadidiko na dia mitovy aza ny tena zava-misy, angona maro heveriko ho zava-dehibe tsy fantatsika velively, toy ny niandohan'ny V.
Mila mahita azy indray aho, izao satria manana famakiana vaovao aho ary hanome ny mason-tsivana bebe kokoa.
Aza adino ny hevitra iray manan-danja. Alan Moore dia nanala ny tenany tamin'ny fanovana sarimihetsika. Tsy te-hiseho amin'ny mari-pankasitrahana izy noho ny tsy fankatoavany ny fomba nitondrana ny tsy refesi-mandidy tao amin'ilay sary.
Ny raozy izay natolotr'i V dia i Violet Carson izay karazana loko salmona izay manana ny anarany amin'ilay mpilalao sarimihetsika Violet Carson, mazava ho azy, fantatra amin'ny andiany anglisy Coronation Street
Amin'ny fotoana iray amin'ny tantara an-tsary ampiasain'izy ireo ny abidia aeronautika na abidia fonetika icao, izay rafitra noforonina mba hahafahana manome toky bebe kokoa amin'ny onjam-peo amin'ny seranam-piaramanidina. Izy io dia ampiasaina handefasana karazana fampahalalana, indrindra raha ny isa na ny teny izay ilazana ny maha-zava-dehibe ny fanoratany sy ny fahazoana azy marina.
3 Ny sarimihetsika sy ny tantara an-tsehatra